२० बैशाख, २०७७ – Mero UK
Day: २० बैशाख, २०७७
२० बैशाख, २०७७ २० बैशाख, २०७७ / अनलाइन खबर
२० वैशाख, काठमाडौं । शनिबार बेलुका ४ बजेका लागि तोकिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक डेढ घण्टा पछाडि धकेलेपछि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईजना महत्वपूर्ण व्यक्तित्वसँग वार्तालाप गरे- पहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, त्यसपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड । शीतलनिवासमा राष्ट्रपतिलाई करिब आधा घण्टा भेटेर फर्केका प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवायलको बैठक सुरु …
ओली-प्रचण्डवीच ४० मिनेट कानेखुसी, माधव अझै सशंकित Read More »
२० वैशाख, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आत्मालोचना गरेका छन् । साथै उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउने निर्णय भएको छ । प्रधाननमन्त्रीओलीले बामेदव गौतमलाई कोरोना महामारी सकिएपछि प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव राखेपछि नेकपा सचिवालयको पहिलो …
प्रधानमन्त्री ओलीले गरे आत्मालोचना, बामदेवलाई प्रतिनिधिसभामा लैजाने निर्णय Read More »
२० वैशाख, काठमाडौं । ‘काठमाडौंलाई कस्तो बनाउने ?’ अक्सर विकासे योजना र कार्यशालाहरूमा यही मुद्दा जल्दोबल्दो हुन्थ्यो । तर, कुरो अर्कै रहेछ । काठमाडौंलाई कस्तो बनाउने होइन, बरु काठमाडौंलाई कस्तो नबनाउने भन्ने कुरामा पो मन्थन गर्नुपर्ने रहेछ । काठमाडौं सहर आफैँमा रहरलाग्दो रहेछ । हराभरा । उत्तरतिर चम्किएका लस्करै हिमशृंखला । नागबेली आकारमा फैलिएका खोला-नाला …
काठमाडौं सहर, हेर्दा लाग्छ रहर Read More »
३० दिन लकडाउन, वर्षभरि भौतिक दुरी र व्यापक टेस्ट भए कोरोना नियन्त्रण !
कोरोना भाइरसबारे थाहा भए पनि कोभिड-१९ हाम्रालागि नित्तान्त नयाँ रोग हो । यसका क्लिनिकल पार्टहरू धेरै छन् । त्यसमा अहिले म जाँदिनँ । आज म पब्लिक हेल्थको पाटोबाट केही कुरा गर्छु । यसमा आजको दिनमा र एक महिनाअघि पनि हामीले जान्नुपर्ने तीनवटा प्रश्न महत्वपूर्ण थियो । पहिलो, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
छोरालाई पनि सिकाउनुपर्छ घरधन्दाको काम
हामी साथीभाईमाझ, सभा–समारोहमा नारी अधिकार एवं लिंगभेद विरुद्ध ठूल–ठूला कुरा गर्छौं । तर, आफ्नै घरमा हुर्किरहेका छोरोलाई जुठो भाँडा उठाउने, माझ्ने, कुचो लगाउने, लुगा धुने काम सिकाउँछौं ? चाहे घरायसी कामकाजमा होस् वा खेलौनाको छनौटमै, हामीले सानैदेखि बच्चालाई विभेद गर्न सिकाउँछौं । छोरीले खेल्ने गुडिया छोरोले खेल्न हुँदैन, » पुरा समाचार पढ्नुहोस
२० वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पछिल्लो दिनमा बजेट निर्माणको तयारीमा व्यस्त छन् । कोरोना संक्रमणको जोखिम र लकडाउनका कारण बजेटसम्बन्धी छलफलमा उनी भर्चुअल रुपमा मात्रै उपस्थिति जनाइरहेका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र म्यानेजमेन्ट एसोसियसन अफ नेपाल (म्यान)ले गरेको कार्यक्रममा पनि उनले सहभागिता जनाए । म्यानको कार्यक्रममा उनले लकडाउनका कारण …
‘नोक्सानीको दायित्व सरकारले मात्रै बोक्ने हो भने कर बढ्छ’ Read More »